profile Company - Yangzhou Jetway Dalxiiska Co., Ltd
Waxyaabaha lagu raaxeysto Hotel ku qabsada
Kit Hotel Ilkaha
Hotel Kit xiirashada
xirmada wax aan waxba tarayn
La aasaasay sanadkii 2001, Shirkadda waxa uu ku yaalaa Yangzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha. products waa kala duwan laga bilaabo Accessories Musqusha, Accessories hurdada si qurxinta Accessories, iwm dib markii 16years horumarinta, our sannadkii ugu badnaan 12 million oo doolar. Ka sokow, si ay kuu siiyaan adeegga macaamiisha fiican iyo waxyaabaha fantastic, waxaan ku siinayaa habka wax soo saarka xirfadeed, gacanta adag ee wax cayriin, nidaamka tayada oo dhamaystiran iyo sidoo kale awooda manufactory awood badan.
Waxay ku taallaa in magaaladiisa Raaxeysto hotel, our warshad daboolaa aag guud ee 6000 mitir oo laba jibbaaran, oo ay ku jiraan 6 workshops, bakhaar iyo 12 khadadka-soo-saarka. awooda sahay Our warshad ee gaadho 20 milyan qaybood bil kasta. 150 shaqaale khibrad iyo kooxda tayada our hubiyo kartaa wax soo saarka ee tayada ugu fiican.
Marka hore, waxaan heysanaa koox xirfadeed QC si loo xakameeyo soo saarka. Marka labaad, waxaan leenahay oo dhan diiwaanka faahfaahsan ee wax soo saarka nonconformity. Ugu dambeyntii, waxaan samayn dhawraan xeerarka khuseeya anshaxa & sharciyada dawladda.
Cabirada, noocyada & midabo la samayn karaa si aad u dalbato. Waxaad noo soo diri kartaa adiga oo dalbaday faahfaahsan oo aan ku faraxsanahay in ay diyaariyaan oraah shaqsi ee wax soo saarka aad helitaanka macluumaadka noqon doonaan. Marka doorashada aad ayaa loo sameeyey, oo xubin ka ah kooxda la taliyaha wax soo saarka gaar ah noo leh oo aad kala dooran muhiim graphic iyo waqtiga dhalmada ka shaqayn doona.
kooxda design Professional
kooxda Professional ka mid ah naqshadeeye iyo shaqaalaha farsamada. Our koox ayaa karti aad ku qorshayso waxyaabaha kala duwan sida aad fikradaha.
macaamiisheena inta iman sameeyaan America, Europe, suuqa dhexe-Julius Karangi ayaa Asia. Oo annagu waannu dhoofiyay in ka badan 70 dal iyo gobollada.
The baakadaha alaabta leeyihiin kartoon, sanduuqa waraaqaha recycle, bacda Eco-friendly, bacda PE, warqada jiingado, film PP, kaarka khariidad. Oo dhan baakadaha 'midabka, size, daabacaadda logo waxaa la samayn karaa sida ay codsiyada macmiilka.
No.10 Tongzhou Road, Hangji Industrial Park, Yangzhou, 225111, Jiangsu, Shiinaha
Xisbiga Annual 2017
Samee Up Our Branch New In Beijing